Dowladda Soomaaliya oo shatigii duullimaadka dalka kala noqotay shirkado Kenyaan ah – Soomaali 24 Media Network
Dowladda Soomaaliya oo shatigii duullimaadka dalka kala noqotay shirkado Kenyaan ah
Posted on June 1, 2020 Leave a Comment on Dowladda Soomaaliya oo shatigii duullimaadka dalka kala noqotay shirkado Kenyaan ah
Dowladda Soomaaliya ayaa shatiga duulimaadka ay ku imaan lahaayeen Soomaaliya kala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo ka diiwaan-gashan dalka Kenya.
Dawladda Somaaliya ayaa ku eedaysay mid ka mid ah labada shrikadood oo lagu magacaabo Buff AIR SERVICES inay diyaarad ay leedahay ay si sharcidarro ah qaad usoo gelisay Soomaaliya iyo inay ku xadgudubtay xayiraaddii ay soo rogtay dawladda Soomaaliya ee dhinaca duulimaadka cudurka COVID-19 awgeed, sida ay sheegeen ilo lagu kalsoon yahay.
Sidaasi oo kale, dawladda Soomaaliya waxay shatiga duulimaadyada Soomaaliya kala laabatay Silverstone Air Services oo isla sidaasi oo kale lagu eedeeyey inay qaad si sharci darro ah kusoo gelisay waddanka iyo inay ku xadgudubtay xayiraadihii ay dowladda ku soo rogtay hawada Soomaaliya cudurka COVID-19 awgiis.
Sidoo kale xubnaha laga helay xogtan waxa ay sheegeen in diyaarad ay leedahay shirkaddaas ay 31-kii May ka degtay magaalada Jowhar oo ay geysay shixnad qaad ah, iyada oo hawada Soomaaliya kusoo gashay inay siddo daawo.
Dawladda Kenya iyo shirkadaha la mamnuucay ayaan weli ka hadlin tallaabadan ay qaadday dowladda Somaaliya ee shatiga duulimaadka ay ugala noqotay diyaaradaha laba shirkadood oo ka diiwaan-gashan dalka Kenya.
← Xukuumadda oo billowday fulinta amarkii R/W Kheyre ee doorashada dalka
Al-Shabaab oo duleedka Qoryooley Midigtiisii nin uga jaray kadib hal arrin oo ay ku eedeeyeen →